के हो क्यान्सर, कसरी बच्ने ? नेपालको के छ अवस्था ? | Kendrabindu Nepal Online News
12860250 567965 4797650 7494635
के हो क्यान्सर, कसरी बच्ने ? नेपालको के छ अवस्था ?
२१ माघ २०७५, सोमबार १७:२४
आज विश्व क्यान्सर दिवस संसारभर विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रमहरु गरि मनाइको छ । हरेक वर्ष लाखौं मानिसहरु क्यान्सरकै कारण मृत्युको मुखमा पुग्ने गर्दछन् । त्यसैले क्यान्सरको बारेमा जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले हरेक वर्ष फेबु्रअरि ४ तारिखमा विश्व क्यान्सर दिवस मनाउँदै आईएको छ ।
क्यान्सर के हो र कसरी हुन्छ ?
क्यान्सर नसर्ने रोग हो । क्यान्सरलाई घातक रोग भनेर चिनिन्छ । यो रोग सबै उमेर समुहकालाई लाग्न सक्छ । शरीरको जुनसुकै अंगमा प्रभावित पार्छ ।
हाम्रो शरीरमा २ सयभन्दा बढि विभिन्न प्रकारका खर्बौ स–साना कोष र कोषिकाहरु मिलेर बनेको हुन्छ । यसमा कोषिकाहरुको एक समूहको अनियन्त्रित वृद्धि या सामान्य भन्दा धेरै फैलिन्छ र अरु स्वस्थ कोशिकाहरुलाई पनि क्षति पुर्‍याउँछ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांक अनुसार प्रतिवर्ष विश्वमा करिब १ करोड २० लाख नयाँ क्यान्सरका बिरामी देखिन्छन् । भने वर्षेनी ७५ लाख क्यान्सर पिडितको मृत्यु हुने गरेको छ ।
अहिले विश्वमा फोक्सो, स्तन, पाठेघर, आमाशय र मुखको क्यान्सर हुने धेरै छन् । विश्वमा कुल मृत्यु हुने करिब १३ प्रतिशत कारक तत्व क्यान्सर बनेको छ । तथ्यांकले क्यान्सर मानव मृत्युको भयानक कारण बनिरहेको देखाउँछ ।
क्यान्सर आफैंमा भनायक रोग हो । तर यो रोग लाग्दैमा आत्तिहाल्नु भने पर्दैन बेलैमा उपचार गरेमा निको हुन्छ । त्यसको लागि नियमित रुपमा जाँच गर्नु र डाक्टरको परामर्श लिनुपर्छ । सुरुवातको चरणमै उपचार गरेमा क्यान्सर पुर्णत निको हुन्छ ।
खासमा समस्या भएको के हो भने अझै पनि ९० प्रतिशत क्यान्सर रोगी अन्तिम चरणमा मात्र अस्पताल पुग्ने गर्छन् । अव्यवस्थित जीवनशैली, चर्को प्रदुषण र तनावका कारणले क्यान्सर लाग्ने गर्दछ ।
क्यान्सरका प्रमुख कारणहरु ?
१) जाँडरक्सीको अध्याधिक सेवनले क्यान्सर निम्त्याँउछ ।
२) चुरोट, खैनी लगायतका सूर्ति जन्य पदार्थहरु धेरै सेवन गर्नाले फोक्सोको क्यान्सर हुने सम्भावना बढि हुन्छ ।
३) बासी, सडेगलेका, जङ्क फुडहरु खाँदा स्वास्थ्यलाई हानी गर्छ । जसले गर्दा आन्द्रा, कलेजो लगायतका भागलाई असर गर्दछ ।
४) वातावरण प्रदूषणलाई पनि क्यान्सरको एकमूल कारण मान्न सकिन्छ । धुवा, धुलोले गर्दा नाक तथा घाँटीको क्यान्सर हुन सक्छ ।
नेपालमा पाइने प्रमुख क्यान्सर र त्यसको कारण:
शिशुलाई स्तनपान नगराउने महिलाहरुलाई स्तन क्यान्सरको सम्भावना बढि हुन्छ । त्यस्तै, डिम्बाशयबाट निस्कने हर्मोनका कारण पनि स्तन क्यान्सर हुनसक्छ ।
स्तन क्यान्सर भएमा स्तन तथा स्तन वरिपरि गाँठागुठी देखिने, स्तनको आकार बढ्ने, निप्पलको रंग गाढा हुने, निप्पल भास्सिने, रातो हुने, निप्पलबाट रगत तथा पिप जस्तो तरल पदार्थ निस्कन्छ ।
सानै उमेरमा विवाह गर्नु, प्रसुती व्यथा लामो समयसम्म लाग्नु, प्रसव व्यथाका क्रममा चोट लाग्नु र त्यो ठिक हुनु अगावै गर्भधारण भएमा गर्भाशयको क्यान्सर हुनुको मुख्य कारण हो ।
गर्भाशयको क्यान्सर भएमा यौनसम्पर्क गर्दा पिडा हुने, महिनावारीपछि पनि रक्तश्राव हुने, योनीबाट दुर्गन्ध पानी बग्ने, खुट्टा तथा कम्मर दुख्ने, पिसाब गर्दा पिडा महसुस हुने गर्दछ ।
सर्भाइकल (पाठेघरको मुखको) क्यान्सरः
सर्भाइकल क्यान्सर भएमा योनीबाट असामान्य रुपमा रक्तश्राव हुन्छ, त्यसको साथै योनीबाट सेतो गन्हाउने पानी बग्छ । त्यस्तै, शरीरमा रगतको कमी हुनुका साथै खान मन नलाग्ने, तौल कम हुने तथा पिसाब सम्बन्धि समस्या हुन्छ ।
धुम्रपान गर्नेमा फोक्सोको क्यान्सर हुने सम्भावना बढि हुन्छ । फोक्सोको क्यान्सर भएमा लामो समयसम्म खोकी लाग्ने, खोकीको साथ रगत वान्ता हुने, आवाज बद्लिने, सास लिनमा कठिनाई हुने हुन्छ ।
त्यस्तै, श्वास लिँदा सिठी बजेको जस्तो आवाज निस्कने, टाउको दुख्नुका साथै चक्कर आउने, शरीरमा कमजोरी महसुस हुने, निमोनिया तथा सास नली सुन्निने, तौल घट्ने, शरीर दुख्ने तथा खान मन नलाग्ने समस्या हुन्छ ।
पेट दुख्नु, भोक नलाग्नु, रगत वान्ता हुनु, शरीरमा रगतको कमी हुनु तथा दिशा गर्दा रगत निस्कनु आमाशयको क्यान्सरको संकेत हो ।
एक्सरे, सिटी स्क्यान लगायतबाट निस्कने विकिरण शरीर भित्र प्रवेश गरेमा यसले शरीर भित्रको हड्डीका साथै रक्तकोषिकालाई समेत प्रभावित गर्छ ।
मुख तथा नाकबाट रगत बग्नु, शौच गर्दा रगत निस्कनु, जोर्नी तथा हड्डीमा दुखाई महसुस हुनु, लगातार ज्वरो आउनु, निरन्तर पखाला लाग्नु, सास लिनमा कठिनाई हुनु, शरीरमा गाठागुठीका साथै नीलो डाम देखिनु, शरीरमा बारम्बार संक्रमण हुनु पनि रक्तक्यान्सरको प्रमुख लक्षणहरु हुन् ।
सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन नै मुख तथा घाँटीको क्यान्सरको प्रमुख कारण हो । मुखभित्र कुनै गाँठो आएमा, घाउ वा पित्त बनेमा, मुखमा सुेतो दाग आएमा, र्‍याल बगेमा, मुखबाट दुर्गन्ध निस्किएमा, मुख खोल्न, बन्द गर्न वा कुनै खानेकुरा निल्नमा समस्या भएमा पनि मुखको क्यान्सर हुनसक्छ ।
मस्तिकमा कोषिकाहरुको असामान्य वृद्धिलाई नै ब्रेन क्यान्सर भनिन्छ । ब्रेन क्यान्सर भएमा मस्तिष्कमा गाँठा देखिने गर्दछ । जसका कारण बारम्बार टाउको दुख्ने, चक्कर आउने, याददास कम हुँदै जाने, आँखा धमिलो देखिने, शरीर असन्तुलित हुने, व्यवहारमा परिवर्तन आउने, कुनै कुरा ठम्याउनमा कठिनाई हुन्छ ।
क्यान्सरका लक्षणहरु ?
घाँटी तथा अन्य अंगमा गाँठागुठी देखिनु
अचानक तौल घट्नु
दिसा पिसाबमा रगत देखिनु
बिना काम पनि थकान महसुस हुनु
बेस्सरी ज्वरो आउनु र निको नहुनु
मुख र जिब्रोमा घाउ आउनु
शरीरमा रगतको कमी हुनु
लगातार खोकी लाग्नु र औषधी खाँदा पनि निको नहुनु
महिनावारी हुँदा अधिक रक्तस्राब हुनु
दिशा पिसावको रंग बदलिएमा
क्यान्सरको रोकथाम तथा बच्ने उपाय
१) यदि घरमा कसैलाई क्यान्सर भएको छ भने क्यान्सर हुने जोखिम बढि हुन्छ त्यसैले नियमित जाँच गर्नुपर्छ ।
२) नियमित रुपमा मेमेग्राम गर्नुपर्छ । मेमेग्रामले स्तन क्यान्सर भएको थाहा हुन्छ ।
३) अन्य अंगको पनि नियमित जाँच गर्नुपर्छ ।
४) शरीरमा अनावश्यक गाठागुठी आएमा, बढेमा, रंग परिवर्तन भएमा जँचाई हाल्नुपर्छ ।
५) पेनकिलरको प्रयोग धेरै नगर्ने
६) स्वास्थ्य जीवनशैली अपनाउने
७) शारीरिक व्यायाम, योगा, ध्यान गर्ने
८) क्यान्सर गराउने कारक तत्वहरुबाट बच्ने
Blood cancer, breast cancer, cancer, क्यान्सर, गर्भाशयको क्यान्सर, फोक्सोको क्यान्सर, ब्रेन क्यान्सर, मुखको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर
Prevमुलुकलाई समृद्ध बनाउन ‘थिंक टयाङ्क’को जरुरी- उपराष्ट्रपति
कांग्रेसको शक्ति प्रदर्शनदेखि क्रिकेटरलाई रातो कार्पेटसम्मNext
सोह्र महिनापछि बिपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालमा अध्यक्ष नियुक्त
बाबा, मम्मीलाई पठाइदिनुस् न !
पुरुष गर्भनिरोध चक्कीले संसारको ५० प्रतिशत जनसंख्या कम गर्ने
८ बर्षिय बालकको अनुत्तरित प्रश्न-‘बाबालाई किन आगो लगाउने ?’
तिमी चाँडै निको हुन्छौं निमा
जो क्यान्सरपिडितका लागि लड्दा लड्दै आफै थलिए (भिडियोसहित)